महामारीको भुमरीमा जान उर्लियो भिड (भिडियो रिपोर्टसहित)
२०७७ कार्तिक १६ आइतबार ०२:०९:००
अहिलेसम्म ८१ लाख संक्रमित भएको भारत विश्वको दोस्रो प्रभावित देश हो, तर दु:खसुख दसैँ मनाएका नेपाली आर्थिक दसा टार्न भारत पस्दै छन् । एकैपटक ठूलो भिड नाकामा पुगेपछि व्यवस्थित गर्न प्रहरीलाई पनि सकस परेको छ ।
गाउँमा छाक टार्नै मुस्किल हुन थालेपछि पश्चिम पहाडका बासिन्दा कोरोना महामारीकै बीच रोजगारीको खोजीमा हुलका हुल भारत जान थालेका छन् । अवस्था कतिसम्म भयावह छ भने भारत जानेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न बाँकेको जमुनाह नाकामा खटिएको प्रहरीलाई हम्मे परेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाहका इन्चार्ज सइ विष्णु गिरीका अनुसार शनिबार मात्रै एक हजार तीन सय ६० नेपाली भारततर्फ लागेका छन् । शुक्रबार सात सयभन्दा बढी गएको उनले बताए । ‘दसैँको टीका छाडेर फूलपाती, महाअष्टमी र नवमीका दिन पनि धेरै नेपाली भारततर्फ गए । दसैँ सकिएको भोलिपल्टदेखि त नाकामा थामिनसक्नु भिड लाग्न थालेको छ । भिड नियन्त्रणका लागि थप बल मगाउनुपर्ने अवस्था आइसक्यो,’ सइ गिरीले भने ।
भारतमा कोरोेना महामारीले भयावह रूप लिइरहेकाले त्यसतर्फ नजान सम्झाउँदा उल्टै झर्किने गरेको गिरीले बताए । ‘कामका लागि भारत जानेहरू एकसाथ ठूलो संख्यामा आउँछन् । कतिलाई सम्झाउनु र बुझाउनु ? बाध्य भएर भारत गइरहेकालाई सम्झाउन खोज्दा झर्किन्छन््, गाली गर्छन्,’ उनले भने, ‘भारत जानेलाई रोक्न खोज्यो, भारतबाट फर्किनेहरू जबर्जस्ती प्रवेश गर्न खोज्छन् । नाकामा पुगिसकेकालाई रोक्न सम्भव छैन ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अनुसन्धाता डा. रत्नमणि नेपालका अनुसार कोरोना महामारीका कारण नेपाल आएका मात्र होइन, अहिलेसम्म भारत नगएका पनि अब भारत जान सक्छन् । ‘बृहत् ढंगले हेर्ने हो भने स्वदेशी श्रम बजार कमजोर भएका कारण यो परिदृश्य देखियो । नेपाली न त खेतीपातीमा नै अडिन सक्ने आधार भो, न रोजगारीका अन्य विकल्प । मेरो विचारमा त कोरोनाकालअघिका वर्षहरूमा भन्दा अबचाहिँ भारत जाने कामदारको संख्या बढी हुन सक्छ । किनभने नेपालका साना तथा मझौला उद्योग र अनौपचारिक क्षेत्रमा जसरी रोजगारी गुमेको छ त्यो हामीले तत्काल पूर्ति गर्न सकिने देखिँदैन,’ उनले भने ।
#भारत जानेको भिड # परदेश # भारत
लुले डढाउँदै छ भारतका मजदुरलाई
मोदी भ्रमणको पूर्वतयारी : भारतीय सुरक्षाकर्मीले गरे लुम्बिनीमा रेकी
करोडौँको सुन चोरीमा संलग्न तीन भारतीय पक्राउ